Humanities | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Ny maha-olombelona
Hafiriana no lasa ny vanim-potoanan'ny vato?
Naharitra hafiriana ny vanim-potoana vato? Vato vato ao amin'ny arkeolojia Vatom-panjonoana Fitoerana vato Ny daty marina amin'ity vanim-potoana ity dia tsy azo antoka, mampiady hevitra ary faritana manokana amin'ny faritra. Na izany aza, afaka miresaka momba ny vanim-potoana vato isika ...
Soraty araka izay azo atao ny siansa maro araka ny lalàna.
Azafady mba omeo anarana siansa ara-dalàna betsaka araka izay azo atao ny siansa ara-dalàna dia fahalalana momba ny fanjakana sy ny lalàna amin'ny ankapobeny. Saingy mizara roa izy io, toy ny siansa feno ...
fisehoana an-tsoratra eto an-tany
ny fisehoan'ny asa soratra eto an-tany Ny soratra voalohany niseho teto an-tany dia Sumerian. Tokony ho 5 arivo taona lasa izay no nitrangan'izany. Ny soratra nataon'izy ireo dia nantsoina hoe cuneiform amin'ny endriny taty aoriana. Nanoratra tamin'ny takelaka tanimanga izy ireo ...
inona no atao hoe grenady?
inona ny scraper Masinina mihetsika amin'ny tany natao ho an'ny sosona (sosona marindrano) fandavaka tany, fitaterana ary famenoana azy ireo amin'ny rafitry ny tany amin'ny sosona matevina iray. :))) Scraper, scraper, manomboka amin'ny scrape ka hatrany ...
Azonao valiana ve?
Afaka manampy mamaly ve ianao? Ramapithecus dia nofaritan'i John Lewis voalohany tamin'ny 1934 avy amin'ny valanorano ambony hita tany India, izay tokony ho 12 tapitrisa taona. Taty aoriana, hita tany Atsinanana ny fatiny ...
inona ny vokatra
inona ny entam-barotra entam-barotra dia ianao no mividy sy mivarotra. Tafiditra ao amin'ity sokajy ity koa ny olona. inona no amidy. Tova # 769; p dia zavatra rehetra mandray anjara amin'ny fifanakalozana maimaimpoana amin'ny zavatra hafa. 1, ...
Ahoana no niseho ilay marika?
Ahoana no nisehoan'ny mari-panontaniana ?? Ny mari-piatoana dia famoronana vao haingana. Ny fiteny Tandrefana sy Afovoany Atsinanana dia tsy misy mari-piatoana akory, ary na ny Asyrianina sy ny babyloniana dia mametaka ny toerana ihany amin'ny farany ...
Inona no atao hoe fiantrana?
inona ny atao hoe fiantrana? Diksionera manazava Ozhegov JEREO: hanomezana olona fialofana sy sakafo P. kamboty. Rakibolana explanatory an'ny fiteny Rosiana JEREO, jereo, jereo ary jereo; tsinontsinona; ostritsa. iza (inona) (lany andro). ...
Fanampiana Anglisy azafady raha adika amin'ny teny idioma / teny. MAHATSIARO. Rosiana
Teny anglisy azafady mba ampio aho handika teny / fitenenana. TENA maika. Fandikana Rosiana Mametraha tanjona iray-mba hahatratrarana tanjona ny tenanao Mans healh dia miharatsy-miharatsy ny fahasalaman'ny olombelona manomboka ny fihodinan'ny baolina - hifindra miaraka amin'ny ...
inona no dikan'ilay teny hoe "famoizam-po"? mba omeo ohatra ny fihetsika mamoy fo
inona no dikan'ilay teny hoe "famoizam-po"? azafady manomeza ohatra ny fihetsika mamoy fo Ity dia rehefa tsy misy lalan-kivoahana amin'ny karazana bontolo. Fa mila mahita an'io tokoa ianao. Ary avy eo dia hoy izy ireo: Izy no nanao, sa izy no nanao ...
Azafady mba lazao ahy ny famaritana ireo fepetra takian'ny fahalalana sy ny tanjon'ny fahalalana ...
Azafady mba lazao amiko ny famaritana ny teny hoe kognita sy ny tanjon'ny fahalalana ... Tsy tadidiko ny tena fe-potoan'ny sain'izao tontolo izao, fa ny lohahevitra dia ny fahalalana, ary ny zavatra azo fantarina (zavatra toa izany :))))))) Lohahevitra ...
Marksisma-Leninisma / Hazavao fohifohy sy mazava tsara Inona izany? Inona no fototry ny ideolojia?
Marxism-Leninism / Manazava fohifohy sy mazava Inona izany? inona ny votoatin'ity firehan-kevitra ity? Marxism-Leninism dia siansa amin'ny lalàna momba ny fampandrosoana ny natiora sy ny fiarahamonina, ny siansa momba ny revolisiona ary ny fandresen'ny sosialisma ao ...
inona no zava-dehibe
inona ny epic dia epic dia karazana literatiora mifototra amin'ny fitantarana ny zava-nitranga taloha, matetika amin'ny endrika fahatsiarovana ny zava-nitranga taloha sasany. Hatramin'ny taonjato faha-18 dia ...
Ionic reaction equations.
Fitoviana fanehoan-kevitra ionic. tsy misy fomba fampitoviana iôna amin'ny fanehoan-kevitra Ny fiota simika amin'ny vahaolana amin'ny electrolytes (asidra, bases ary sira) dia miroso amin'ny fandraisana anjaran'ny ion. Ny vahaolana farany dia mety hijanona ho mazava (ny vokatra dia mety levona anaty rano) ...
Ampio azafady ... mila hakitroka varahina ..
Ampio azafady ... mila hakitroka varahina izahay .. Density: 8,96 g / cm3 Vongan'ny varahina - 8,93 * 103kg / m3; Ny tanjaky ny varahina - 8,93 g / cm: 3; Hafanana manokana an'ny varahina amin'ny 20oC - 0,094 kal / deg; Ny hafanan'ny varahina ...
mila fanampiana. Lazao azafady ny tanjona lehiben'ny fiarahamonim-pirenena.
mila vonjy. Azafady mba omeo anarana ny tanjona lehibe amin'ny fiarahamonim-pirenena. ny zavatra hafa rehetra dia mikoriana avy eto. Hevitra ...
Inona ny angon-drakitra amin'ny fanisam-bahoaka 1926 amin'ny aterineto amin'ny tanàna?
Inona ny angona misy amin'ny Internet momba ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 1926? Tamin'ny 17 desambra 1926, dia natao ny fanisam-bahoaka voalohany an'ny Vondrona Iraisam-pirenena an'ny USSR, izay nandrakotra ny isan'ny mponina ao amin'ny firenena. Fomba fanaovana fanadihadiana no nanatanterahana azy. Nisaina ny tena vahoaka. ...
Inona no atao hoe "inferensi"
Ny atao hoe "inferensi" dia ny fizotran'ny eritreritra ary anaovana didim-pitsarana vaovao avy amin'ny fitsarana iray na maromaro, antsoina hoe toerana, antsoina hoe fehin-kevitra na vokany. Ny tsimparifary dia matetika no mizara ho amin'ny fanokanana (jereo ny: Fanapahana) ...
Ampio aho hahita ny fanatanjahantena ARGENTINA, GUINEA, LIVIA, MALAYSIA, USA, FINLAND, CHILE azafady azafady azafady
manampy amin'ny fitadiavana specialization ARGENTINA, GUINEA, LIBYA, MALAYSIA, USA, FINLAND, CHILE azafady azafady azafady azafady azafady ary inona ny fanaingoana manokana resahanay? Raha miresaka ara-toekarena isika dia mandeha eto, mamaky ny famokarana uranium, ary koa ny hena sy ny varimbazaha, momba ny injeniera mekanika ...
iza ary ahoana ny nilentehan'ny sambo Bismarck?
iza no nilentika tamin'ny sambo mpiady Bismarck ary tamin'ny fomba ahoana? jereo eto - tena amin'ny antsipiriany, isa-minitra: ny rohy dia voasakana amin'ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ilay tetikasa. Ny ady "Bismarck" dia sambo mpiady amerikana, iray amin'ireo malaza indrindra ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 34 Next Page
78 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,173.